Odayaasha & Waxgaradka Galguduud oo Puntland ku eedeeyey in ay burburinayso Galmudug – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Odayaasha & Waxgaradka Galguduud oo Puntland ku eedeeyey in ay burburinayso Galmudug
Qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka ee gobalka Galguduud, gaar ahaana kuwa Beesha Ceyr ayaa si adag uga hadlay martigalinta Puntland ee Kooxda Ahlu Suna oo ka tanaasushay arrimaha siyaasadda Galmudug iyo ficilada ay ka wadaan deegaanada Puntland.
Odayaasha dhaqanka oo xalay ka hadlayay kulan ka dhacay Dhuusa-Mareeb ayaa sheegay in ay Puntland faragalin siyaasadeed ku hayso Galmudug, ayna kasoo horjeedo in heshiis iyo wada hadal laga gaaro arrimaha siyaasadeed ee horey uga dhacay deegaankan.
Odayaasha qaarkood ayaa sheegay in ay horey Puntland mudo dheer u hubeyn jirtay kooxaha gobalada Galmudug ku hardami jiray, haddana ay markale doonayaan in ay soo maraan xagga Ahlu Suna oo ay bilaabaan dagaal ay isku dhiibaan qeybaha bulshada.
Odayaasha ayaa sheegay in Puntland ay diidan tahay horumarka iyo dowladnimada ka jirta Galmudug, iyagoona shaaca ka qaaday in ay qorsheynayaan in ay bur buriyaan maamul goboleedka Galmudug.
Sidoo kale odayaasha ayaa waxaa ay tilmaameen in xiligan ay Puntland abaabuleyso hoggaanka Ahlusuna ee loogu awood badiyay magaalada Dhuusamareeb.
Arintan ayaa ku soo aadaysa xili hoggaanka Ahlusuna ay bilaabeen in ay dib u soo celiyaan eedamaha ay u jeedinayeen dowladda federaalka soomaaliya, iyagoona haatan wada abaabul aan caadi aheyn
Previous Xukuumadda oo ka Hadashay Koox u Ololeynaysa inay dib u midoobaan Somaliland iyo Soomaaliya
Next Yuusuf Garaad wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ayaa soo dhoweeyay magaacaabista M/weyne Qoorqoor ee ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda Caleemasaarka ee m/weynaha Galmudug